निर्वाचन अपडेटमा अनलाइन पत्रिका पहिलो नम्बर | शहरबाट शब्दहरु
« खोकना घटनाको खास कुरा !
सबै ठिकठाक चलिरहेकै छ »
निर्वाचन अपडेटमा अनलाइन पत्रिका पहिलो नम्बर
मंसिर ७, शुक्रबार, २०७०
साँझतिर सुत्नु अघि विद्युतीय दैनिकी लेख्छु भनेर वाचा गरिरहँदा पनि भुसुक्कै बिर्सिने बानी परेको छ । हेर्नुस् न, तीन दिनको दैनिक छुटेछ । मंसिर ४ गते निर्वाचनमा सहभागी हुन पुग्दाको दैनिकीसमेत लेख्न सकिन । आज चुनावको चटारोलाई केही थमौती राख्दै लेख्न बसेको छु । चुनाव सकिएको आज तेश्रो दिन हो ।
ललितपुरको चुनावको ताजा विवरण दिनको लागि आज साँझसम्म पनि निरन्तर खटिरहेकै थिए । मत गणनास्थलमा अनलाईन पत्रिकाका सहकर्मीहरू (जीबी लामा, विनोद रंजित र सुमन श्रेष्ठ) ले निरन्तर अपडेटमा तैनाथ रहे । हामीले दावी गर्नैपर्छ, अपडेट दिने अनलाइन पत्रिका नै पहिलो हो । ललितपुर निर्वाचन अपडेटमा हाम्रो अपडेट यहाँ हेर्न सकिन्छ । निर्वाचन सकिएको दिन देखि ललितपुरको ताजा नतिजा विवरण हामीले ब्रेक गरिरह्यौं । जीतको नतिजा र विजयीहरूको समाचारपनि पहिला राख्ने काम अनलाइन पत्रिकाले नै गरेको हो ।
आज बल्ल केही हल्का भएको छ । चुनावकै कुरा गर्नुपर्दा ललितपुरको तीनवटै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ । अरू खासै विशेष कुरा लेख्नु छैन । तर, लेख्नै पर्ने कुरा के हो भने पत्रकारितामा लागेको एक दशक वितिसक्दा मैले कमाएको सम्पति भनेकै साथीभाई हो । ललितपुरबाट समाचार अपडेटका लागि धेरै मिडियाका साथीहरूले सम्झिए । सक्ने र जाने जतिको सहयोग गरेँ पनि । भोली फेरि नियमित छलफलमा सहभागी हुनुछ । यसपालिको अनलाइन पत्रिका प्रकाशित गर्न सकिएन । अस्तु ।
This entry was posted on नोभेम्बर 22, 2013 at 3:47 अपराह्न and is filed under दैनिकी. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.
One Comment on “निर्वाचन अपडेटमा अनलाइन पत्रिका पहिलो नम्बर”
जुन 23, 2014 at 7:03 बिहान